China FOTON U9 / U10 ifektri abakhiqizi | Izithombe
Umqeqeshi we-Foton U9 / U10 nakanjani uzoba nogqozi kunoma iluphi uhambo olunezici zalo zobuchwepheshe ezintsha, okuqinisekisa ukutholakala kwezimoto ngezinga eliphezulu nokusetshenziswa kwazo futhi zisebenza kahle futhi zibe namandla.
Ubukhulu Sekukonke 9380 * 2500 * 3400
Nciphisa Isisindo 9.8T
Ukuhlala Umthamo I-39 + 1 + 1/41 + 1 + 1
Izinga Lokukhishwa I-EURO III - EURO VI
Igumbi leLuagge 4.5m3
Ukubukeka nokuzethemba. Ukubukeka kufaka i-avant-garde yaseYurophu eyakha ngokuvumelana okuphelele ne-aesthetics yaseMpumalanga. Inamandla futhi inemfashini, ukumodeliswa kwayo okuqinile nokulinganisa okulinganiselwe kuyabona umqeqeshi eletha ukuthintwa kokuzethemba emgwaqweni.
Uzimele we-Election Electroplating ezimise okwephiko
Inhlanganisela LED Umsila Lamp
Injini yeCummins ISB,
Ukuphuma kwe-Euro VI,
ukushesha kusuka ku-zero kuye ku-90 mph ngemizuzwana engama-28.
Intelligent Ukupholisa uhlelo
Ifakwe inqubo yobunikazi enelungelo lobunikazi- uhlelo lokupholisa lokulawula okuzenzakalelayo olunamafeni ayi-7 kagesi.
Ukwehliswa okuhle kakhulu
Ukubambezeleka okukhulu kufinyelela kuma-30 degree.
Ukusebenza okungajwayelekile emgwaqeni omncane
Ubuncane be-radius efinyelela ku-9.8m.
iTink, umhlinzeki ohola phambili we-IOV, wenza uhlelo lokuphatha oluhlakaniphile oluhlanganisa ukusebenza, ukuphathwa, kanye nensizakalo ukwenza ukuphathwa kwemikhumbi kube lula.I-GPS yokuqapha imoto yesikhathi sangempela ingathola imininingwane yemoto yokuqhubeka nokuhlaziywa kwesimo, njengokuma kwezimoto, isimo sokusetshenziswa kukaphethiloli, isivinini, ukushesha, ukuqondisa, ukugijima ithrekhi